သင်၏ About Us စာမျက်နှာသည်ဤအကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုလိုက်နာပါသလား။ | Martech Zone
An ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း စာမျက်နှာထဲမှာအသေးစိတ်သူတို့အားစာမျက်နှာများတစ်ခုဖြစ်သည် တိုင်းက်ဘ်ဆိုက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်၎င်းကိုပေးသည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသောစာမျက်နှာဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးစွာသော ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း ၀ န်ထမ်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကုမ္ပဏီ၏နောက်ကွယ်ရှိလူများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်စာမျက်နှာကိုမကြာခဏကြည့်ရှုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အလားအလာကောင်းသည့်အရာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများသက်သက်မျှသာမဟုတ်ကြောင်းသူတို့မကြာခဏမေ့တတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသူများနှင့်အလုပ်လုပ်တော့မည်ဟုစိတ်ချလို။ နောင်တရခြင်းမဟုတ်ပါ!
ယုံကြည်မှုနှင့်လေးစားမှုသည်ရရှိသင့်သောအရာများဖြစ်သည်။ အသိအမြင်စိတ်ကိုထိပ်တန်းဖြစ်ခြင်းကနေလာပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၏အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်များဖြစ်သင့်သည်၊ SEO နှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အီးမေးလ်။ သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စာမျက်နှာသည်သင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ထဲစွဲမှတ်သွားစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ (ပြီးတော့အဖြစ် အပြာရောင် Acorn ရဲ့ လေ့လာမှုကသက်သေပြနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ရောင်းရန်လည်းအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ) အကြီးတန်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူဗင်းဆင့်နီရို
Siege Media သည်မြင့်မားသော About Us စာမျက်နှာများနှင့်တူညီသည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြသသည့်မော်ကွန်းဆောင်းပါးကိုစုစည်းခဲ့သည် ၅၀ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုစာမျက်နှာနမူနာများ။ သင်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်လိုက်နာရမည့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် ၁၁ ခုကိုပြသသည့်ဤလှပသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
value ကိုစီမံခ - သုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အချိန် ၈၀% ကိုအသုံးပြုသောနေရာတွင်သင်၏တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ကိုအထက်တွင်ထားပါ။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား - ဖောက်သည်များသည်ဆိုးကျိုးများထက်စာလျှင်ကောင်းကျိုးများအကြောင်းဖတ်လိုကြသည်။
စိတ်ခံစားမှု Evoke - မင်းရဲ့အလားအလာကသူတို့အပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်ပိုထိတွေ့ဖို့ပိုများလာလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို - ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူအများစုသည်စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာသားကိုဖတ်ခြင်းထက်ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
တည်ထောင်သူ - သင်၏ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ၏မှတ်မိလောက်သောပုံရိပ်တစ်ခုပါ ၀ င်ပါကပြောင်းလဲမှုသည် ၃၅% တိုးပွားစေလိမ့်မည်။
ဓါတ္ပုံမ်ား - ဖောက်သည်များသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်စာဖတ်ခြင်းထက်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရန် ၁၀% ပိုအချိန်ပေးကြသည်။ အချို့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရိုက်ချက်များအတွက် splurge!
ဓာတ်ပုံမရှိ - စတော့အိတ်ခ်ျသည်ဓာတ်ပုံများသည်လုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
သက်သေခံချက် - ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များသည်ရောင်းအားကို ၃၄% တိုးစေသည်။
အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များ - ၇၂% သောလူများကအပြုသဘောဆောင်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများက၎င်းတို့အားဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်ဟုဆိုသည်။
လှုပ်ရှားမှုမှ Call - သင်၏စာမျက်နှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် the ည့်သည်ကိုဘာလုပ်စေချင်သနည်း။ CTA တစ်ခုထည့်ခြင်းဖြင့်သုံးပွင့်ဆိုင်စကားပြောဆိုမှုများ!
Contact Info - ၅၁% သောလူများကစေ့စပ်သေချာစွာဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ (စာမျက်နှာတိုင်းတွင်၎င်းကိုထည့်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ )
ဒီနေရာမှာ infographic ပါ။ ဂရိတ်နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာစာမျက်နှာများ.
Tags: အကွောငျးကိုယ်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစာမျက်နှာ element တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစာမျက်နှာများအကြောင်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဝိုင်းထားခြင်းမီဒီယာဂရိတ်နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာစာမျက်နှာများဗင်းဆင့်နီရို
သင်၏အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အတူဂလိုဘယ်လိုက်သွားရန်လမ်း (၆) ခု